Ukuthungulwa Kwezinkuni Zezinkuni - I-China Wood Wood Edge Banding Supplier, Factory -HengSu Edging
Ikhaya » Imikhiqizo » I-Edge Banding » Ukukhishwa kwe-PVC Edge
Ukukhishwa Kwezinkuni Zezinkuni Zezinkuni
Uchungechunge lwe-woodgrain luhlanganisa okuningi okucacile.kuyizinkuni ezingenasici, Umbala kanye nokusanhlamvu nge-gradation ecebile kanye nomphumela ocacile, kufana nokufana nezinkuni eziluhlaza, kungafanelana kahle nebhodi ebhodini.
PVC woodgrain ezinemibala futhi inyatheliswe ngazo zonke uhlobo woodgrain iphethini, imikhiqizo babe okusezingeni eliphezulu eyenziwe woodgrain umphumela, zibonisa adhesion Namandla, okuhlala isikhathi eside futhi abupheli, umbala ngeke fade futhi ungaphambuki esimhlophe emva ilungiswe. Futhi singakwazi ukufuna ukuvunyelwa lonke uhlobo ka woodgrain umbala ofanayo ngokusho isicelo yekhasimende.
PVC (polyvinyl chloride) namuhla omunye amapulasitiki owaziwa kakhulu futhi ezivamile. Sekuyiminyaka engaphezu kweminyaka engu-40 edgebands ngemboni ifenisha tiphindze ekhiqizwa kusuka lomlayezo futhi ziye zaphumela yaphumelela kakhulu ngenxa izinto ezivelele yabo izici. Ngo Ikakhulu, i-enhle kakhulu ukucubungula izici PVC eqondile yohlelo lokusebenza iye yaba negalelo ukufohla yayo emakethe ifenisha yokukhiqiza.
I-200m ngomqulu ngamunye, imiqulu ye-10 nge-carton.also ngayinye ingayiphatha njengezimfuneko zamakhasimende
Amaklayenti angakhetha ukuhamba olwandle noma ukuhamba emoyeni
Ukuthungulwa kwe-PVC Wood Grain Edge